I-China Safe, insimbi engamelana nomlilo, ikhodi yokukhiya iminwe, zonke izinhlobo zefektri ephephile nabakhiqizi | Boda
Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, isisefo sanamuhla sithuthukile sisuka emsebenzini olula wokulwa nokweba siye ezinhlotsheni ezingabaleki, ezinjengokulwa nokweba, ukuvimbela umlilo, ukulwa nokuntshontsha, ubufakazi bomlilo, ukulwa namandla kazibuthe, indlu, ibhizinisi, ihhotela , izibhamu, amadokhumende, imininingwane, njll.
Ngenxa yefenisha yomsebenzi wayo okhethekile nokulwa nokweba, kufanele kunakwe ngokukhethekile ukukhethwa kwesisefo. Ukukhethwa kwesisefo kungacatshangelwa ngokuyisisekelo kulezi zici ezilandelayo:
Ukukhethwa kwempahla yensimbi ye-1.Steel: hlukanisa ukushuba, okokusebenza kanye nemvelaphi yensimbi yensimbi, ehlobene namandla okuphepha lapho usebenzisa amathuluzi akhethekile afana ne-drill kagesi nokusika.
2.Forming futhi Welding: hlola ukuthi umzimba iKhabhinethi yakhiwa ngesikhathi esisodwa, uhlole ukuthi igebe phakathi umnyango iKhabhinethi nohlaka umnyango, nokuthi inkinobho kuyinto nezimo. Uma igebe likhulu kakhulu, umsebenzi we-anti prying uzokwenziwa buthakathaka. Esiphepheni esingenamlilo, igebe elikhulu kakhulu alivunyelwe.
Isakhiwo esenziwe ngokwesiko: Lokhu kungumongo wesisefo. Ngoba isebhokisini, umsebenzisi akakwazi ukuyibona, kepha kuyisihluthulelo sokuvimbela ukuvulwa kobuchwepheshe. Abasebenzisi bangacela umthengisi ukuthi avule ikhava yangemuva ngemuva kwephaneli lomnyango ukuze ahlole ukuthi isakhiwo sendabuko sangaphakathi siqondile yini nokuthi ukudluliswa kuyaguquguquka yini. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi sihlole ukwakheka kwebhawodi yokukhiya. Ububanzi besikhiya sokukhiya kufanele buqine. Manje ifomethi eyaziwayo yokukhiya imishudo inomphumela omuhle wokuvula.
4.Lock: uma isakhiwo sendabuko singaphezulu, lapho-ke ilokhi liyiphuzu elibaluleke kakhulu. Ukucekela phansi ilokhi noma ukulingisa ukhiye kulingana nokucekela phansi inhliziyo yomshini wokulwa nokweba. Izikhiye eziyinkimbinkimbi zingavimbela ngempumelelo umonakalo nokukopishwa kokhiye.
Izingxenye ze-5.Izinto ezisizayo: ukucutshungulwa kwezingxenye zokungcebeleka kufanele kuqinisekise ukuthembeka kokusebenza kwazo ukubhekana nendawo esetshenziswa njalo eguqukayo.
Umsebenzi we-alamu: kukhona umsebenzi we-alamu othomathikhi, futhi ngaphansi kwezimo ezithile i-alamu ezenzakalelayo inganikezwa (njengokuhamba, ukushaya noma amakhodi amathathu angalungile). Vele, ngokucebile izimo zokwenza kusebenze, kungcono. Njengamanje, ama-safes amaningi awunawo umsebenzi we-alamu othomathikhi, noma kunezimo ezimbalwa zokuvula i-alamu ezizenzakalelayo. Udinga ukubuza ngokucacile lapho uthenga.
Ukwelashwa kwe-Anti corrosion: uma le nqubo ingaphathwa kahle, izothinta ukubukeka kwebhokisi, futhi ezimweni ezibucayi, izodala umonakalo emsebenzini. Ngaphakathi nangaphandle kwesisefo sokulwa nokweba kufanele kupendwe, kufuthwe ipulasitiki nokunye ukwelashwa okulwa nokugqwala. Ukuphepha kwemishini.
Ukubukeka: okunamandla futhi okuyisidina akusekho ukuqonda kwekhasimende okuphephile. Abantu bakuthatha njengomhlobiso wasekhaya. Okokuqala, bheka ukuthi ngabe indawo ibushelelezi nokuthi upende ulingana yini. Okwesibili, bheka ukuthi umbala nokuma kungokwenhlobo yabo abayithandayo, bese uhlangana nemvelo yangempela yehhovisi ukuze uthenge.
9.Size: linganisa usayizi ophephile ngokuya ngezidingo zakho zangempela. Uma ibekwe ekhoneni lodonga, akudingekile ukuthi ubheke usayizi ngokweqile. Uma idinga ukubekwa endaweni ecashile, njengekhabethe, ubukhulu besisefo bufinyelela kuma-50 cm kanti isisindo siphakathi kuka-30kg. Kumele kuqashelwe ukuthi ama-safes amaningi anokuphakama okungaphezu kwama-50 cm anamasondo aphansi futhi angahanjiswa noma yikuphi. Manje kukhona osayizi abaningi kanye nezincazelo zokuphepha. Ngokuvamile, ubukhulu obukhulu bungaba ngaphezu kuka-100cm. Kungabuye kwenziwe ngezifiso. Kuthatha izinsuku eziyi-15 ukwenza ngezifiso.
I-10.Ibhethri: ngokukhethekile iphephile iphasiwedi ye-elektroniki. Ngaphezu kwebhethri elakhelwe ngaphakathi, i-password ephephile ye-elekthronikhi ngokuvamile inayo ibhokisi langaphandle lebhethri eliseceleni. Lapho uthenga, udinga ukunaka ukuthi kuqediwe yini. Izinhlobo zeBOSENDA zesisefo nazo zinokukhonjiswa kwamandla kuphaneli, okunganikeza lula okuningi ekusebenzeni kwangempela.
Ukuhlinzekwa okuphephile kwe-BOSENDA ukucaciswa okuphelele kwebhokisi lokuphepha / okuphephile, ibhokisi lokuphepha lokumelana nomlilo / okuphephile ngemisebenzi ehlukile kanye nezincazelo ezichazwe ngenhla, isisindo singenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ukhiye wokhiye, ukukhiya iminwe, ukukhiya kwephasiwedi kunganikezwa ngokusho izidingo ezahlukahlukene, okokusebenza kusuka kupuleti lensimbi elijwayelekile kuya kupuleti lensimbi enzima kakhulu, elenziwe ngezifiso ngokwezidingo ezahlukahlukene. Ukukhiqizwa kwanyanga zonke kwamashumi amayunithi, ukulethwa okusheshayo, ukugwema isikhathi sokulinda kwamakhasimende. Ukukhiqizwa ngokusebenza kahle okuphezulu, ukulawula okuqinile kwazo zonke izixhumanisi.
Langaphambilini Nweba izipikili ngezikulufo, isikulufa sokunweba sepulasitiki, isikulufa sokunwebeka scew uzipho, iziqeshana eziyikhebula
Olandelayo: I-Angle grinder, umthelela wokuprinta, isando, i-ion drill, amathuluzi kagesi
I-Angle grinder, i-impact drill, isando, i-ion dri ...